Kemgbe Septemba anyị na-eme obere ego iji nweta ndị na-eso Twitter na otu akaụntụ anyị. Ndị a abụghị akwụ ụgwọ ụmụazụ, nke a bụ eziokwu Mgbasa ozi Twitter ezubere iche na ịkwalite akaụntụ ahụ na ndị ọrụ ndị ọzọ. Mgbasa ozi Twitter na-enye gị ohere ịkwalite ma akaụntụ ma ọ bụ iji kwalite tweets. Anyị anwalebeghị nke abụọ, mana nsonaazụ nke nkwalite akaụntụ ahụ doro anya yana agbanwe agbanwe.
Akaụntụ a tozuru ihe dịka 30% na-eji nkwado Twitter karịa karịa na-enweghị. Anyị atụkwasịla ndị na-eso 887 maka $ 729.81 = ụgwọ nke 82.3 cents kwa onye na-eso ụzọ. Nke a bụ akaụntụ ejiri akara, ọ bụghị nke onwe, yana nkọwa nke akaụntụ ahụ doro anya ma doo anya - ọ dịghị ihe dị egwu ma ọ bụ na-atọ ụtọ. Ọ dịghị ihe dị egwu.
Ọ kwesịrị ya? Ikekwe. N'okwu a, anyị na-anwa imepe obodo a ma chọọ naanị akụkọ dị mkpa ga-erite uru ma nye aka. Anyị anaghị achọ nnukwu ọnụ ọgụgụ, anyị na-anwa ịchọta ma gbakwunye ndị otu kwesịrị ekwesị. Saịtị a anyị na - eto eto adighi akwalite ego zuru ezu maka ịlaghachi azụ na ntinye ego a n’oge a mana anyị nwere ntụkwasị obi na ọ ga - eme n’ọdịnihu.